परशु प्रधान Archives | साहित्यपोस्ट
साहित्यका माली परशु प्रधान
उमेश अकिञ्चन	 १८ जेष्ठ २०७९ ०८:०१ 0
वरिष्ठ साहित्यकार परशु प्रधानलाई कसरी सम्झना गरुँ ? निजामती सेवालाई त्यागेर स्वतन्त्र साहित्यिक छविमा रमाउने व्यक्ति भनुँ ? वा वाणी प्रकाशनका अध्यक्षको रूपमा साहित्यलाई स्थापित गराउने योद्धाको रूपमा सम्झुँ ? वा नयाँ पुस्ताका कवि,…
श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’	 ३० भाद्र २०७८ १०:०१ 0
हुँदैन नभेटुन्जेलसम्म सम्बन्ध कसैसँग । हुँदैन सरोकार पनि कुनै । रहँदैन भेटे पनि अर्थ । हुँदै जान्छ जोडघटाउ सम्पर्कमा आएपछि नै । हुँदै जान्छ हिसाबकिताबमा जोडघटाउ । हुन्छन् सम्बन्ध यस्ता पनि । नजिकै लाग्छ टाढा भएर पनि । भेटिसकेजस्तो लाग्छ…
क्लासिक कथा- घर-९
१ असार २०७८ १४:०१ 0
जीवनभरको पीडादायी र दुःखान्त भयो- मेरो पहिलो रात अर्थात् हनिमुन । म कुनै कवि वा लेखक होइन, न कुनै दार्शनिक । मेरा सारा सपनाहरू एकै रातमा खरानी भएका थिए, मेरा सारा इच्छा, आकाङ्क्षाहरू पानीपानी भएका थिए । कुनै नाटक वा सिनेमामा घट्ने, हुन…
क्लासिक कथा : टोकियोमा सानु बुद्ध
२१ पुष २०७७ ०६:०१ 0
टोकियोमा फेरि हिउँ पर्नै लाग्यो । गएको वर्षन्दा धेरै छिटो जाडो आयो । धेरै छिटो रुखका पाताहरू झर्न थाले । यौटा चिसो सिरेटोले मुटु कपाउन लाग्यो ⁄त्यहाँ भन्दा यहाँ धेरै जाडो र चिसो हिउँ । त्यहाँ भन्दा यहाँ बाँच्न धेरै कठिन भयो । पाल्देनलाई…
४ आश्विन २०७७ ०६:०० 0
(नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा विशेषगरी कथा साहित्यमा निकै ठूलो योगदान गर्नुहुने परशु प्रधानका अनेकन कथा सङ्ग्रहहरु प्रकाशित छन् । उपन्यास प्रकाशित छन् । अन्तरवार्ताहरु प्रकाशित छन् । उनीसँग २०७६ साल माघ २८ गते साहित्यकार गोविन्द गिरी…
२० पुष २०७६ १६:०१ 0
२० पुष २०७६ १३:०१ 0
टोकियोमा फेरि हिउं पर्नै लाग्यो । गएको वर्षन्दा धेरै छिटो जाडो आयो । धेरै छिटो रुखका पाताहरू र्झन थाले । यौटा चिसो सिरेटोले मुटु कपाउन लाग्यो ⁄ त्यहां भन्दा यहां धेरै जाडो र चिसो हिउं । त्यहां भन्दा यहां बांच्न धेरै कठिन भयो । पाल्देनलाई…